A tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha na Kaduna nke dị obodo Naịjirịa wee gbalaga. · Global Voices n’asusu Igbo
All topics AfricaAmericasAsiaEuropeMiddle EastCOVID-19PolitiksiCultureInwe ikikere nke ndị mmadụAgbamụmbọ dịgitalụ
Agha na ọgbaaghara
Ịchụ ntaakụkọ na mgbasaozi
Inwe ikikere nke ndị mmadụ
Mgbasaozi ndị Amaala
Mgbochi ekwumuche onye
Mmekọrịta mba ụwa niile
Mwereonwe maka nkwupụta uche
Ndị Ntorobịa na agbọghọbịa
Omenala na Nkà dị icheiche
Ụmụ nwaanyị na genda
A tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha na Kaduna nke dị obodo Naịjirịa wee gbalaga.
Ndị ọchịchị Naịjirịa ekwughị ihe ọbụla banyere ọtitọ nke a.
Translated byOnyinye Jane Onuoha
Translation posted 5 October 2020 19:42 GMT
Read this post in Italiano, Malagasy, русский, Swahili, Español, Français, English
Ụmụ akwụkwọ nọ na Kaduna Steeti, Naịjirịa. Onye nwetara foto a bụ Jeremy Weate, January 15, 2010 site na Flickr / CC BY 2.0.
Ndị ntoro ji egbe wabidoro ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke dị na Kaduna, ugwu-Hausa Naịjirịa, na ụbọchị ịrị abụọ na anọ nke ọnwa Ọgụstụ, e gbukwara otu onye ma tọrọ ụmụ akwụkwọ anọ otu na onye nkụzi, ozi a sị na aka ndị ụlọ ọrụ Naịjirịa na-agbasa ozi site n'ikuku bụ SabaraReporters.
Ndị ọjị egbe nke bịara na ógbè Damba-Kasaya nke dị na mpaghara Chukun dị na Kaduna Steeti, oge ọ a-akụ elekere isaa na iri anọ na ise nke ụtụtụ, ha ji ụgbọ ọgba tumtum wee gaa ógbè ebe ha gburu otu nwoke aha ya bụ Benjamin Auta, nke bụ onye ọrụ ugbo, ozi a sị na aka ndị Naịjirịa na-agbasa ozi n'ikuku nke aha ya bụ Akwụkwọ Mgbasa ozi Premium Times.
Ndị ọjị egbe ahụ gakwara na ụlọ akwụkwọ Prince Academy Sekọndrị Skuulu, ebe ha tọrọ onyenkuzi aha ya bụ Christianah Madugu na ụmụ akwụkwọ anọ, aha ha gụnyere Favour Danjuma, onye dị afọ itenanị, Miracle Danjuma, onye dị afọ ịrị na atọ, Happy Odoji, onye dị afọ iri na anọ na Ezra Bako, onye dị afọ iri ise.
Nna Happy bụ Isiaka Odoji, gwara ndị ụlọ ọrụ Daily Trust, na Naịjirịa daily, na ndị ọjị egbe ahụ kwuru na aga enye ha nde naria ịrị na abụọ ( nke pụtara ego dolla puku ịrị ise) tupu ha ahapụ umuazi ahụ ka ha laba — ego ha agaghị enwe ike ịnwetanwu.
Ụmụaka ahụ a tọrọ na afọ gara aga bụ ndị na-ele ule ikpeazụ nke junio sekọndrị sukuul ha. N'ihi mberede COVID-19, nanị ụmụ akwụkwọ nọ na ngwụcha ụlọ akwụkwọ ka a gwara bido akwụkwọ.
Ndị fedira gọọmenti na ndị steeti gọọmenti nke Kaduna ekwubeghi ihe ọbụla gbasara ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha.
‘Ihe a dịghị mma na Naịjirịa chaa chaa’
Ndị ji Tuwita, Ndị Kato kwụrụ na nke a gwụrụ mmadụ ike na ala anyị;
Today in Kaduna state, children in exit classes who were told to resume school were kidnapped by armed gunmen. One was reportedly killed. Small boy, his life cut short. The others have been taken away and we may never hear of them again.
This should devastate any nation…
— Ndi Kato (@YarKafanchan) August 24, 2020
Ụbọchị nke tata, ndị ntọrọ ji egbe tọrọ ụmụ akwụkwọ a gwara bido akwụkwọ na Kaduna Steeti. E kwuru na e gburu otu mmadụ, nke bụ obere nwa ntakịrị nwoke ala furu ndụ ya n'ike. A tọrọ ndị ọzọ gbalaga, e nwekwara ike, anyị agaghị anụkwa ụzụ ha ọzọ.
Nke a nwekwara ike igwu mba ọbụla ike…
“Nke a bụ ihe doro ewu na ọkụkọ anya na Naịjirịa ” ọ bụ Chima Chigọzie kwụrụ ihe a na Tuwita.
Some school children were kidnapped in kaduna, one of the school boys was killed
along the line. The boys life was cut short, the school children are being held in fear. This should spike the nation but NO, it's a normal day in Nigeria.
— Chima Chigozie (@CallMeGozie) August 25, 2020
A tọrọ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na Kaduna, ma gbukwa otu nwatakịrị nwoke na-aga akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ oge ihe a na-eme. Ndụ nwatakịrị ahụ gbabiri n'ike, ụjọ ji ụmụ akwụkwọ na-aga akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ihe a kwesiri imetụta ala anyị ma na ọ dịghị etu ahụ makana ọ bụ ihe na-emebu emebu na Naịjirịa.
Jaja katọrọ agwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihe gbasara enweghị obi ị metere ndị mmadụ ebere ma ọ bụ nwee nwute gbasara ntọrọ a tọrọ ụmụ akwụkwọ:
The abducted Kaduna Boys will not get the same support and attention as the Chibok Girls because firstly, they are boys, and secondly, GEJ isn't President.
— Jamal (@JajaPhD) August 26, 2020
Ụmụ akwụkwọ ndị nwoke ahụ a tọrọ na Kaduna agaghị enweta enyemaka ndị ụmụaka ụmụnwanyị Chibok nwetara n'ihi, nke mbụ, ha bụ ụmụ nwoke, nke abụọ, ọ bụghị GEJ nọ dịka Onyeịsị ala.
Goodluck Ebele Jonathan (GEJ) bụ onyeisi ala Naịjiria na onwa Eprel afọ puku abụọ na iri na anọ oge ndị agha Boko Haram tọrọ ụmụ akwụkwọ ụmụ nwanyị ndị na agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti sekọndrị skuulu nke dị na ugwu hausa na obodo Chibok. Nke a mere e jiri wepụta hashtag ụwa niile akpọrọ #KpochiChiyataraAnyiUmunwanyianyi nke kpalitere mụọ karịrị nde mmadụ na ụwa dum.
Gukwuo : Ndị ala Naịjiria ṅụrịri ọṅụ banyere nghapụ ndị Boko Haram hapụrụ ndị Chibok mmadụ ịrị asatọ na abụọ.
Na mkpụrụ ụbọchị iri na itenanị nke ọnwa Febrụwarị na afọ puku abụọ na iri na asatọ, ndị Boko Haram tọrọkwara ụmụ akwụkwọ ụmụ nwaanyị di otu narị na iri na agụ akwụkwọ na ụlo akwụkwọ Kolegi Gọọmentị ụmụaka ụmụ nwaanyị nke Sayensị na Teknụzụ na Dapchi, Yobe Steeti , Ugwu Hausa, Naịjirịa.
Gukwuo : Ụmụ akwụkwọ ụmụaka ụmụ nwaanyị ndị Boko Haram tọrọ nwụrụ ebe e debere ha.
Ntọrọ a tọrọ ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị na Damba-Kasaya na ndị nkụzi ha bụ ihe butere ihe ụjọ wụrụ ewu.
Naanị ihe dị iche na ajọ ihe mberede a bụ na ndị mere ihe a ụgbụ a abụghị ndị Boko Haram, ha bụ ndị ajọ otu ọjị egbe.
Ị Chọpụta Ndị Omekome nọ na Kaduna
Ajọ akparamagwa ndị omekome ka njọ na steeti ndị hausa di na Naịjirịa, steeti ndị a gụnyere Zamfara, Kaduna, Niger, Sokoto, Kebbi na Katsina.
ACAPS, ndị na echepụta echiche na otu nọrọ onwe na ahụ maka mmadụ na ibe ya kwụrụ na “ iji ngwa ọgụ imerụ ndị ndị mmadụ ahụ bụ aka ọrụ ndị Boko Haram na ugwu hausa”
The banditry violence began as a farmer/herder farmer/herder conflict in 2011 and intensified between 2017 to 2018 to include cattle rustling, kidnapping for ransom, sexual violence and killings. By March 2020, more than 210,000 people have been internally displaced.
Ndị ajọ otu na emerụ ndị mmadụ ahụ bidoro dịka otu ndị na-achị efi na ọgba aghara e nwere na afọ puku abụọ na iri na otu wee rụọ afọ puku abụọ na iri na asatọ nke gụnyere ịzụ ohi efi, ị tọrọ ya, igwaso ya ịkọ n'ike ya na igbu ya. Site na Maachị afọ puku abụọ na iri na abụọ, ọ rụọla narị puku ịrị abụọ na puku ịrị e gbugoro.
Ndụ ndị ime ime obodo nọzi na aka ndị omekome, ndị gbugoro ọ pekata mpe ihe karịrị mmadụ otu puku na otu narị na iri abụọ na isii site na Jenụwarị ruo na ọnwa Juun afọ a na ugwu Hausa, Naịjirịa.
Ndị otu Amnesty mba ụwa niile kwuru na ọ bụ ọgbe dị na sautan Kaduna ka ọ metutakarisiri, ihe dịka mkpụrụ obi mmadụ narị atọ na ịrị isii ka ala furu na ọkara afọ puku abụọ na iri na abụọ.
Ndị mmadụ nọ na otu dikotara ọnụ na Sautan Kaduna na mpaghara Chikun bụ ebe obibi ụmụ akwụkwọ ahụ a tọrọ, ha ahutula ihe dị etu mbụ nke butere ọnwụ, ọtitọ, ” nke a tinyere ógbè ịrị anọ na ise na ọgbahara. Ihe a bidoro nkemgbe afọ puku abụọ na iri na itenanị “
Ndị Sautan Kaduna na atụ aka ma kwụe na ndị omekome a bụ ndị na achị efi, ha kwukwara na ọ bụ ala n'ese, aka ndị fedira gọọmenti na nke ndị steeti ahụ dịkwa na ya.
Mana Gọvanọ ndị Kaduna Steeti bụ Nasir El-Rufai goro agịgọ ma kwuo na ọ nweghị ihe agbasatara ndị e gburu na izo ala ma ọ bụ ndọrọ-ndọrọ ọchịchị nke sitere na okpukpe.
Ka ọnwa Ọgụstụ dị na mkpụrụ ụbọchị ịrị abụọ na abụọ, Kaduna Steeti gọọmenti kwusịrị ihe akpọrọ curfew na ọlụ bekee bụ nke e mere site elekere isii nke abalị rụọ na elekere isii nke ụtụtụ, nke a bụ nke metụtara ụfọdụ akụkụ steeti ahụ ka e nwere kwusinata mpụ na ndị omekome.
Agbanyeghị, Luka Binniyat, onye nkwụchite okwu ndị otu dịkọtara ọnụ na Sautan Kaduna nke akpọrọ SOKAPU na aha ịchafo gosipụtara nwute ya “agụụ so ná egbu anyi n'ihi na anyị anaghịkwa agazi ọrụ ụgbọ. Ndị be anyị tọrọ atọ.
Sọb -Saharan Afrịka
Recent Sọb -Saharan Afrịka Stories
#JisieIke: Ka mmachibido iwu Twitter na -emetụta ndị ntorobịa Naịjirịa
Naịjiria 10 October 2021
A nwụchiri onye ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa maka ịkatọ ntọrị ụmụakwụkwọ
Naịjiria 8 October 2021
Ndị Naijiria chọrọ aha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị amachiri ịnweta akwụkwọ ikike visa US
Naịjiria 29 September 2020
Ọ dịghị onye ịtụkwasị obi? Ozi na-ezighi ezi banyere COVID-19 na ntuli aka na-abawanye na Latin America na Caribbean
Karibịanụ 13 October 2021
A mara onye bụbu onye isi ala Surinam Dési Bouterse ikpe maka igbu ọchụ nke ugboro abụọ – mana ọ ga -aga ụlọ mkpọrọ?
Karibịanụ 21 September 2021
Ọ gịnị mere na umụ nwanyị agaghị eso na ndị na-edeba aha alụmdi na nwunye na obodo Bangladesh?
Saụtụ Eshịa 21 September 2021